Free Video riixo Software
Large videos had iyo jeer wakhti badan ku qaadato in ay geliyaan iyo sidoo kale download. Sidaas darteed waa fikrad fiican in aad cadaadin videos ugu horeysay oo markaas iyaga la geliyo ama u soo dir dadka kale. Halkan waxaan ku soo qaado ugu sareysa 5 free video riixo Software Tools caawin doona in aad ku cadaadisaa aad videos ugu badnaan aan hoos tayada.
3D-DCT Video riixo Software
Istoo'ikiin Video Converter
Microsoft Expression Encoder waa nooca la casriyeeyay ee Windows Media Coder. Waxaa la iman kala duwan oo ku cadaadisaa aad size file video. Waxaa xitaa waxay bixisaa ah A / B barbardhig badhanka si aad u tijaabiso-beegyada uu riixo si uu u kasbado miisaanka u dhexeeya tayada video file size iyo video ah. Waxa kale oo jira habab aragtida kala duwan si deg deg ah oo muujinaya farqiga u dhexeeya Tifaftirayaasha iyo uncompressed video oo tayo leh.
2. 3D-DCT Video riixo Software
3D-DCT Video riixo Software waxa uu isticmaalaa ah technology- farsamo xariif ah oo cusub 3D-DCT. Hoos u dhacaasi ku size ogol Ergo siman ee files ee ku hoos jira xaalad baaxadda hooseeysa. Waxa kale oo uu leeyahay interface fudud oo si toos ah weeraryahan, taas oo kuu ogolaanaya in aad ku cadaadisaa aad videos ku salaysan tayada iyadoo la sii tayada ugu fiican gaari karo, oo ku salaysan doorashada.
3. Windows Movie Kan sameeyey,
Inkastoo Windows Movie Kan sameeyey ma aha software ah editor video xirfadeed, waxa uu qabtay shaqo aad u weyn in la fududeeyo habka of compressing file video for web oo aad u fududahay qof kasta si ay u isticmaalaan.
Freemake Video Converter waa aalad diinta video awood badan la isticmaalo diinta videos in qaabab kala duwan. Waxaa dajiyaan karaa inta badan video, audio, iyo qaabab image, iyo wax soo saarka si ay u AVI, MP4, wmv, Matroska, FLV, Jabbuuti, 3GP, DVD, Blu-ray, MPEG, iyo MP3. Barnaamijku waxa uu sidoo kale isku diyaarinaya videos ay taageerayaan qalabka kala duwan ee multimedia, sida qalabka Apple iyo Qalabka telefoonada gacanta ee kala duwan. Kaliya Waxaad dooran kartaa qaabka aad rabto in aad cadaadin.
5. Istoo'ikiin Video Converter
The STOIK Video Converter ayaa laba nooc - xor ah oo taabacsan. Version ayaa lacag la'aan ah oo keliya u ogolaanaya video ah riixo aasaasiga ah. Haddii aad rabto in aad hesho muuqaalada tafatirka iyo video filtarrada si ay u tagaan la software video riixo, ka dibna waa in aad u cusboonaynta in version Pro.
Haddii aad rabto in aad cadaadin videos for tafatir dheeraad ah ama si DVD gubanaya, ee Wondershare Video Converter Ultimate ku siinayaa hal-stop ah xal. Waxa ay taageertaa oo dhan qaabab video caan ah oo kuu ogolaanaya in aad ku cadaadisaa videos in DVD5 ama disc DVD9. Fursadaha iyo goobaha laga heli karo si user waa kala duwan oo waxaa jira qaababka sixiddiisa sidoo. Hadda isku day tani awood badan software video riixo oo aad ka heli doontaa sababta aad u wanaagsan sababta ay tani ka mid ah uu leeyahay "Ultimate" on magaceeda.
> Resource > Video > Top 5 Free Video komberesarrada